FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်း | FLEGT
FLEGT လိုင်စင်သည် ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) ရယူထား သည့် နိုင်ငံမှ သစ်များသည် နိုင်ငံတော်ဥပဒေများအရ ခုတ်လှဲ၊ အချောကိုင်၊ တင်ပို့လိုက်သည့် သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ FLEGT လိုင်စင်များသည် နယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပြီး ထုတ်ကုန်အမှတ် တံဆိပ် အဖြစ်မရည်ရွယ်ပါ။
VPA တစ်ခုစီ၏ နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုချင်းသည် FLEGT လိုင်စင်များအတွက် ပုံစံကိုEU ပုံစံအပေါ် အခြေခံပြီး သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဘုံကျသည့် ပုံစံသည် မတူညီသော VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ ထုတ်ပေး လိုက်သည့် လိုင်စင်များအားလုံးသည်ပုံစံတူဖြစ်နေသော်လည်း နိုင်ငံအလိုက် သတင်းအချက်အလက်များ အတွက် ကြိုတင်စီမံထားပါသည်။
VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အာဏာပိုင်များသည် EU သို့ တင်ပို့မည့် သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းကုန်စည်များအတွက် FLEGT လိုင်စင်ကိုထုတ်ပေးပြီး ၎င်း ကုန်စည်များသည် တရား၀င် သက်သေခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် စစ်ဆေးထားကြောင်း ပြသထားသည်။
လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အာဏာပိုင်သည် FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ချဉ်းကပ်နည်း ၂ မျိုးသုံးနိုင်သည်။ ။
သင်္ဘောတင်ခြင်းအပေါ်အခြေခံ၍။ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အာဏာပိုင်သည် ပို့ကုန်တစ်ခုစီကို တရားဝင် ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း စစ်ဆေးပြီး သည့်အခါ လိုင်စင် ကို ပို့ကုန်တစ်ခုခြင်းအလိုက်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းရှင်ပေါ်အခြေခံ၍။ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အာဏာပိုင်သည် သစ်အချောထည်လုပ်ငန်း ရှင်တစ်ဦးကဲ့သို့ သီးခြားလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း သစ်၏တရားဝင်ဖြစ်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဟုကျေနပ်လျှင် ယင်း အာဏာ ပိုင်သည်အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှ ပို့ကုန်အားလုံးကို FLEGT လိုင်စင်များထုတ် ပေးပါ သည်။
ချဉ်းကပ်နည်း နှစ်မျိုးလုံးတွင် သင်္ဘောတင်ကုန်စည်အတွဲ သစ် သို့မဟုတ် သစ်ထွက်ပစ္စည်းတိုင်းသည် FLEGT လိုင်စင်ပါရှိသည်။
FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်စနစ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရှိလာပါက EU ၏ နယ်စပ်ထိန်းချုပ်ရေး အေဂျင်စီများ သို့မဟုတ် "ကျွမ်းကျင်သော အာဏာပိုင်များ"သည် VPA နိုင်ငံမှ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား နှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲပါ ထုတ်ကုန်များအားလုံးကို စစ်ဆေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ FLEGT လိုင်စင်ပါသည့် ထုတ်ကုန်များကို EU ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။ FLEGT လိုင်စင် မပါပါက ကျွမ်းကျင်သော အာဏာပိုင်များသည် ထုတ်ကုန်များအား ဈေးကွက်သို့ ဝင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ EU ဈေးကွက်အတွင်းသို့ တရားဝင်သည့် သစ်ကိုသာဝင်ရောက်စေခြင်းဖြင့် EU ကန့်သတ် ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများသည် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းကို အဆုံးသတ်အောင် ကြိုးပမ်းမှုများအား အားဖြည့်ပေးပါသည်။
EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီသည် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ လိုင်စင်မပါသော သစ်များ ဝင်ရောက် လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ကို ချမှတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ VPAs စံနောက်ဆက်တွဲ များသည် ၂ဝဝ၅ EU FLEGT စည်းမျဉ်းများတွင်ဖော်ပြသည့် FLEGT လိုင်စင်ကိုစစ်ဆေး အတည်ပြုခြင်းအတွက် EU လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ပြထားသည်။ လိုင်စင်မပါဘဲ သင်္ဘောဖြင့်တင်ပို့ လာသည်များကို EU နယ်စပ်တွင် တားမြစ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ FLEGT လိုင်စင်ရသစ်တင်သွင်းမှုအပေါ် EU လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်VPA နောက်ဆက်တွဲ တွင်ကြည့်ပါ။
FLEGT လိုင်စင်ရသစ်တင်သွင်းမှုအပေါ်EUလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲ
EU. 2007. FLEGT Briefing Note 08: Market participant-based legality assurance and FLEGT licensing. European Union. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]